म काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ को साझा उम्मेदवार हुँः डा. भट्टराई (भिडियो) | KTM Khabar
२०७४ कार्त्तिक १४ गते ००:३४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । मंसिर २१ मा हुने दोश्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाबमा केन्द्रित रहेर यत्ती बेला आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत तथा चुनाब जित्ने अभियान बनाउनका लागि स्थानिय राजनीतिकर्मी, विभिन्न दलका कार्यकर्तादेखी केन्द्रका नेताहरु पनि क्रियाशिल भई रहेका छन् ।
यस्तै चुनाबको रौनक काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ मा पनि देख्न थालिएको छ । नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष तर्फका सर्वसम्मत उम्मेदवार डा. राजन भट्टराई चुनाबी मैदानमा आएका छन् । सोही उम्मेदवारीका विषयमा केटिएम खबर डट कमका लागि श्याम कार्कीले क्षेत्रगत कुराकानी तथा समग्र उम्मेदवारीको विषयमा विशेष सम्वाद गरेका छन । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
यत्ती बेला के कुरामा केन्द्रित हुनुहुन्छ ?
यत्ती बेला साथीहरुले निर्वाचनमा उठ्नु पर्यो भन्नु भएको छ । निर्वाचनका लागि साथीहरुको सुझाब, सल्लाह, सहयोग अनुसार उठ्ने सोच बनाएको छु । सोही हिसाबले साथी–भाईहरुसंग भेट–घाट, सल्लाह, राय बुझ्ने, के गर्दा ठिक हुन्छ ?, उठौ कि नउठौ ?, उठ्दा खेरी कसरी उठ्ने ? भन्ने विषयमा नै साथी–भाईहरुसंग भेट–घाटमा नै व्यस्त छु ।
प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारका लागि यहाँको नाम पक्का–पक्की भइसकेको छ, प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारहरुको नाम कहिले टुंगो लाग्छ ?
काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ को प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारका लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मेरो मात्र नाम सिफारीस भएको छ । नाम पठाउनका लागि हाम्रो तल्लो कमिटीहरुलाई जुन अधिकार दिइएको थियो । सोही क्रममा काठमाडौँको क्षेत्र नम्वर ४ बाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मेरो मात्र उम्मेदवारी रहने गरी साथीहरुले नाम पठाउनु भएको छ ।
प्रदेश सभाको ‘क’ को हाम्रो टुंगो लागि सकेको छ । निर्मल कुइकेल त्यसको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । प्रदेश ‘ख’ को उम्मेदवार हामी केही दिनमा टुंग्याउने छौ ।
डा. राजन भट्टराई क्षेत्र नम्वर ४ संग जोडि रहदा धेरैको लागि कौतुहलताको विषय बन्न सक्ला, यस बारे के भन्नुहुन्छ ?
म यो क्षेत्र नम्वर ४ मा नै हुर्केको व्यक्ति हुँ । मैले पशुपती मित्र माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा १ देखी ३ सम्म पढे । त्यसपछी कक्षा ४ देखी पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, पुतलीसडकमा पढे र त्यहाबाट मैले एसएलसी दिएको ।
मेरो बुबाले २०१२ सालमा महांकालमा घर किन्नु भएको, त्यसपछी त्यो घर बेचेर २०२४ सालदेखी मैजुबहाल बसेको । म हुर्केको मैजुबहालमा । त्यसपछी चाबहिल चोक बजारमा हामी सर्यौ र बजारबाट यहाँ बुलबुलेमा बस्दैछौ । बसाईको हिसाबमा मेरो ४ नम्वरको सम्बन्ध भन्नुहुन्छ भने यो खालको रह्यो ।
राजनैतिक कर्म थलो पनि मेरो यही क्षेत्र नम्वर ४ हो । म कक्षा सात पढ्दादेखी अखिलमा लागे । काठमाडाँै उपत्यका भरी अखिलको विद्यालय कमिटी थियो त्यसको सचिव भए, संयोजक भएर तिन वर्ष काम गरे । त्यसपछी हाम्रो पुर्वी इलाका कमिटीको अध्यक्ष भएर काम गरे । त्यसपछी काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको सदस्य भए, कोषाध्यक्ष, सह–सचिव भए, संयोजक भए । त्यसपछी २०४४ सालमा अखिलको केन्द्रमा गए । केन्द्रिय कमिटीमा रहदा पनि मेरो कर्मथलो यहि थियो । २०४१ सालदेखी २०४७ सालसम्म यही रहे । त्यही विचमा करिब १२, १३ पटक जेल गए । मलाई राजकाबी मुद्धा लाग्यो । त्यसो हुनाले राजनैतिक हिसाबले मेरो कर्मथलो यहीबाट सुरु भएको हो । यहाँको दाईहरु जो बामपन्थी आन्दोलनसंग सम्वन्धित हुनुहुन्थ्यो । उहाहरुबाटै शिक्षित, दिक्षित भएको म ।
म अखिलको केन्द्रमा गएपछी मेरो कार्य क्षेत्र विदेशसंग अलिकती जोड भयो । म २०४६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सचिव थिए । त्यती बेला हामी केन्द्रिय स्तरिय वार्ता गर्ने नेपली कांग्रेसका एनपी साहु, चन्द्र भण्डारी र हामी एमालेबाट तुल बहादुर गुरुङ, शंखर पोखरेल, घनश्याम भुसाल संयुक्त रुपमा काम गरेका हौ ।
२०४८ सालमा म अखिलको विदेश विभाग प्रमुख भए । २०४९ सालको मंसिरमा म हाम्रो एसियाली विद्यार्थी संघको सह–महासचिवमा निर्वाचित भए । २०५० सालको माघदेखी एसियाली विद्यार्थी संघका लागि हङकङमा म बसे । चार वर्ष त्यहा काम गरे । त्यसपछी म फर्केर नेपाल आए र पार्टीको विदेश विभागको सचिव भए । त्यसपछी काठमाडौँको उपत्यका कमिटीमा रहे । केही समय पछी बेलायतको मैले स्कलरसिप पाए र बेलायतको लण्डन युनिभर्सिटीको कलेजमा मास्टर्स पढ्नका लागि गए । डेढ वर्षमा मैले मास्टर्स पास गरे । त्यहाबाट फर्किए पछी फेरी विदेश विभाग सचिव भए । त्यही क्रममा जनआन्दोलनका कामहरु अगाडी बढे र आन्दोलन अगाडी बढ्दै जाँदा राजाले लिइसके पछी मलाई पार्टीले दिल्लीमा समन्वयन गर्नका लागि पठायो । त्यत्ती बेला सात पार्टीको सम्वन्ध थियो । एमालेको तर्फबाट मेले प्रतिनिधित्व गरेर त्यो कार्यक्रमहरु अगाडी बढाए । जसमा नेपालका थुप्रै नेताहरु कृष्ण प्रसाद सिटौला, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो, कृष्ण बहादुर महरा, टोप बहादुर रायमाझी, प्रदिप गिरी, हृदेश त्रिपाटी लगायतको साथीहरुसंग संयोजन गरी बसियो । यही क्रममा मैले पिएचडीका लागि जेएनयुमा अप्लाइ गरे र मैले जेएनयुबाट पिएचडी सम्पन्न गरे । त्यहाबाट फर्किए पछी म तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको कार्यकालमा म परराष्ट्र सल्लाहकार भए । त्यही विचमा केही किताबहरु लेखे, सम्पादन गरे साथीहरुसंग मिलेर ।
आज भन्दा तिन वर्ष अगाडी मलाई पार्टीले क्याबिनेटको निर्णयबाट सांसदमा नियुक्ती गर्यो । त्यस पछी आज भन्दा डेढ वर्ष अगाडी नेपाल, भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समुहको सदस्य भएर काम गरिरहेको छु । पार्टीको गत महाधिवेशनबाट पनि म केन्द्रिय कमिटीमा निर्वाचित भएको छु ।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ मा यहाँको उम्मेदवारी किन र केका लागि ?
म राजनीतिमा २०३७ सालदेखी लाग्दै आए । अध्ययन र राजनीति संगसंगै लैजानु पर्छ भन्ने मान्यता राखे । कहिले अध्ययन अलि बढी क्षेत्र बन्यो, कहिले राजनीतिक क्रियाशिलता अलि बढी बन्यो । यी दुई वटा क्षेत्रलाई संगसंगै लैजाने मेरो कोशिस हो । अहिले म खासगरी पार्टीको केन्द्रिय कमिटीको सदस्य भईसके पछी, सांसद बनी सकेपछी राजनैतिक क्षेत्रमा मेरो क्रियाशिलता बढेको छ । यो क्रम बढ्दै गइसके पछी सांसद एउटा बाटोबाट त भइयो तर त्यही बाटोबाट सधै जानु हुँदैन । समानुपातिक अथवा मनोनयनको बाटोबाट हामी जस्तो मान्छेहरु जानुहुँदैन । प्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट जानु पर्छ भन्ने सोच लागि रहेको थियो । त्यो लाग्ने क्रममा नै यहाँ स्थानिय साथीहरु खास गरी क्षेत्र नम्वर ४ नेकपा एमालेका र माथीका नेताहरुले पनि ठिक छ तपाई प्रत्यक्ष तर्फबाट लडेर आउनु पर्छ भन्नु भयो । मलाई त्यो उचित नै लाग्यो । त्यस हिसाबले मैले निर्णय लिएको हुँ ।
क्षेत्र नम्वर ४ मेरो कर्म थलो हो । क्षेत्र नम्वर ४ मा म हुर्के, बढे, पढे र राजनैतिक कर्म थलो २०३७ सालदेखी बनाउदै आए । यत्ती बेला म उठ्नु पर्छ । सांसदमा प्रत्यक्ष तर्फ जानु पर्छ भनेर त्यो क्षेत्रका साथीहरुको सर्वसम्मत उम्मेदवार भइसके पछी मैले अन्यत्र जानु पर्छ भन्ने प्रश्न नै रहेन । त्यस हिसाबले मैले क्षेत्र नम्वर ४ रोजे ।
नेकपा एमालेको क्षेत्र नम्वर ४ बलियो क्षेत्र हो । यो भन्दा अगाडीका दुई वटा चुनाब मात्र हामीले हारेका हौँ । २०४८ देखीको रिजल्ट हेर्ने हो भने कहिले पनि, कुनै चुनाब हारेका छैनौ । २०४८ सालमा मदन भण्डारीले जितेको यो क्षेत्र हो । त्यस पछी विद्या भण्डारीले २०५६ सालसम्म जितेको क्षेत्र हो । २०५४ सालको स्थानिय चुनाबमा पनि हामीले जितेका हौँ, यो म बसेको वडा हामीले जितेका हौँ ।
समय क्रमसंगै विगतमा हाम्रा पनि कमि कमजोरी भए होलान् । त्यसपछी नेपालको राष्ट्रिय राजनीति जुन मोडमा गयो र २०६४ मा हामीले हार्न पुग्यौ अनी त्यसको निरन्तरता २०७० मा पनि भयो तर यी दुई वटा कारणले मात्र यहाँको जनमत एमालेमा कमजोर हो कि ? भन्ने भ्रम परेको छ । यथार्थ त्यस्तो हैन । २०७४ को स्थानिय तहको चुनाब हेर्ने हो भने यो क्षेत्रमा १२ वडा पर्छन् । जस मध्य १० वडा एमालेले जितेको छ । जनाधारको हिसाबले फेरी हामीले पुष्टी गरेका छौँ । यो बामपन्थीहरुको बाहुल्य क्षेत्र हो । त्यस भित्र पनि अहिले नेकपा एमाले मात्र हैन बामपन्थीहरुको साझा उम्मेदवार हुँ । साझा उम्मेदवारको नाताले पनि मेरो थप मत बढेको छ । मलाई लाग्छ हामीले जित्ने आधार बलियो बनेको छ ।
डा. राजन भट्टराईसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानीको लागि युटुब लिंकमा जानुहोसः